Musharax Dr Cabdiraxmaan Cabdishakuur: Wadahadalka lala galayo Somaliland waa ka weynyahay in olole Doorasho loo isticmaalo. Munaasabadii Xafladdii 1-da Luuliyo oo ay ka soo qeyb galeen... Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Musharax Dr Cabdiraxmaan Cabdishakuur: Wadahadalka lala galayo Somaliland waa ka weynyahay in olole Doorasho loo isticmaalo. Munaasabadii Xafladdii 1-da Luuliyo oo ay ka soo qeyb galeen... Xaflad si heersare ah loo soo agaasimay oo lagu xusayey Sanadkii 52-aad ee Xoriyadii Soomaaliya iyo Midnimadii labada Gobol ee Waqooyi iyo Koonfur, islamarkaana lagu soo dhowaynayey Musharax xilka madaxweynimo ee Soomaaliya Dr C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xafladda oo ay soo qabanqaabiyeen Ururka Dhalinyarada Xoriyo ayaa waxaa kazoo qeyb galay qeybaha bulshada sida Siyaasiyiin, Xildhibaano, Odayaal Dhaqameed, Saraakiil sar sare, Haween iyo Fanaaniinta Qaranka ee Waaberi, waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahaa Madaxweynah Maamulka Ximan iyo Xeeb Mudane Dr Maxamad Tiiceey, General Cabdi Qaybdiid, Generaal Nuur Taqsiin, Generaal Caare, Wasiirkii Hore ee TNG Korneyl Cabdiweli Gorod, Generaal Yuusuf Siyaad Indhacade, Gudoomiye ku xigeenka Xisbiga Nabada iyo Dimoqoraadiyada Mudane Dr Abdullahi Sheekh Daahir Muhidiin, Xildhiban Suleymaan iyo Xildhibaano kale oo badan iyo Afhayeenka Dhalinyarada Ururka Xoriyo.
Dadkaas ayaa dhamaantood ku dheeraaday muhiimada ay xoriyadu leedahay iyo sida loogu baahan yahay in si wadajir ah loogu istaago weyneynta maalintaas. Waxay kaloo soo dhoweeyeen Musharax xilka Madaxweynaha Soomaaliya Dr Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Madaxweynaha Ximan iyo Xeeb ayaa isagu sheegay in loo baahanyahay in dadaal dheeri ah la sameeyo oo xaalda wax laga bedelo si ay macno u yeelato maalinta aanu u dabaaldegayno ee 1da Luulyo, isagii dhinaca kale sheegay inuu taageersanyahay Musharaxa Dr C/raxmaan Cshakuur uuna aaminsanyahay inuu yahay nin karti iyo aqoon leh kana soo dhalaali karo hawsha uu isutaagay. Generaal Cabdi Qaybdiid ayaa isaga dhiniciisa sheegay in dhalinyaradu ay u istaagaan dib u dhiska dalka iyo soo noolaynta qarankii Soomaaliyeed, isagoo u rajeeyey Miusharaxa in Ilaaheey Xilkiisa ku guuleeyo. Sidoo kale waxaa halkaasi qudbo qiimo leh ka jeediyey Dr Cabdullahi Sheekh Daahir oo ah Gudoomiye ku xigeenka Xisbiga Nabada isaga oo sheegay in maanta oo ah 52 guurada Maalinta Xornimada iyo Midnimada Soomaaliya ay tahay maalin naga mudan qadarin weyn, Dr cabdulaahi ayaa sidoo kale sheegay in uu si weyn u taageersan yahay Musharaxnimada Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Dr Cabdullaahi Sheekh Daahir ayaa sheegay in dalku u baahan yahay isbedel aysana suuragal ahayn madaxda xiligaan oo waxqabadkooda la arkay inuu aad u yar yahay markale lagu tijaabiyo xukunka isaga oo sheegay in umadda Soomaaliyeed ay leedahay aqoonyahano badan oo dalka ka saari kara dhibaatada iyo colaadaha uu ku jirey 22-dii sano oo lasoo dhaafay dadkaasina uu Kow ka yahay Musharaxa Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Dr Cabdullaahi Sh Daahir ayaa sheegay in wadahadaladii dhex Maray TFG iyo ARS-tu ee ka dhacay Jabuuti ay ku guuleysteen gacantii weyned ee uu ka geystay isfahamsiinta labada Dhinac Dr Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Xildhibaan Sulaymaan Maxamad ayaa sheegay inuu soo dhowaynayo Musharaxnimada Cabdiraxmaan C/shakuur, isagoo dhinaca kale wax laga xumaado ku tilmaamay in Xafladii 1da Luulyo ee xalay lagu qabtay Madaxtooyada Soomaliya ay ahayd mid lagu hayb soocayo dadka , isagoo tilmaamay in isaga iyo Xildhibaano kale ilinka loo Istaagay loona diiday in ay xaflada ka qaybgalaan, iyadoo dad shicib ah oo ilaalada madaxweynaha qaraabo yihiin ooda laga qaaday. Xildhibaan Sulaymaan ayaa arrintaas ku tilmaamay mid niyad jab leh isagoo sheegay in Xafladani ay ka duwantahay kuwii hore dhinaca agaasinka, dadka kasoo qaybgalay iyo qiirada dadka ka muuqata intaba. Musharaxa Madaxweynaha ayaa markii Makarafoonka lagu soo dhoweeyey waxaa la saaray heesta qaranka ee Soomaaliyeed Toosoo, iyadoo dadkii oo dhan ay wada Istaageen sacab iyo sawaxana isku dareen.
Dr C/raxmaan C/shakuur ayaa ugu horayntii codsaday in Faataxada loo aqriyo dadkii Xoriyadan aan harsanayno kasoo shaqeeyey, isagoo dhinaca kale timaamay in geesiyaalkii soo halgamay ay haysteen rasumaal Bulsho taasoo Musharaxu ku tilmaamay isku kalsoonida, wax isku hurida, iskuturida, isku dulqaad, istixgelin, iskudhimrin iyo isaaminaada. Markii Rasamaalkii bulshana uu baabaay ayaa waxaa ka dhashay in xusuustii wadaaga ahayd luntay, dareenkii halista ee wadaaga ahayd lagu kala aragti duwanaado, himiladii ummadeedna ay luntay , isagoo sheegay in loo baahanyahay hogaan Hiigsi qaran abuura, hawl halbeeg leh iyo qorshe qeexan la yimaada, Laakiin aan loo baahnayn hogaan safar dibadeed iyo socdaal joogta ah ku jira intii uu dalka joogana uu sidii Dhakhtar daawa qoraya oo kale ay dadka tikid qaabilaad u jartaan. Wuxuu kaloo musharaxo soo hadalqaaday wadahadalka Somaliland iyo TFG, isagoo soo dhoweeyey arrinkaas kuna amaanay walaalaha Somaliland sidii naf hurnimada iyo niyadsamida ku jirto ay sanadkii 1960kii u keenee calankii midnimadiina u qaateen shuruud laaan, taas bedelkeedana loo baahanyahay in iyaga loo tago, wuxuuse musharaxu ka digay in wadahadalka uu qudbo siro noqdo oo dad waqtigoodii in ka yar 50 maalin ka hartay ay olole doorasho u isticmaalaan.
Musharax ayaa ku dheeraaday taariikhda Soomaaliya iyo sidii ciidanka Soomaaliyeed uu ahaa mid sharaf, hufaan iyo karti leh oo ka madaxbanaan siyaasada, taasina ay keentay in xukunka dalka si nabadgelyo ah.
Waxaa uu dhaleeceyey qaabka awood maroorsiga ah ee ay madaxda hadda jirtaa u isticmaalayaan qalabka warbaahinta qaranka oo uu ku eedeeyey in cid aan iyaga aheyn fikradooda aan laga ogoleyn. Warbaahinta qaranka ayuu sheegay in lagu dhisay canshuurta shacabka Somaliyeed ayna waajib tahay in loo sinnaado isticmaalkeeda.
Waxaa uu nasiib darro ku tilmaamay in heyadihii nabad sugidda ay waddamo shisheeye ku tiirsanyihiin iyadoo aysan jirin miisaaniyad loo qoondeeyey, halka uu madaxda dowladda ku eedeeyey iney maalin walba diyaarad ku kireystaan tobanaan kun oo doller. Askarta difaaca uga jirta gobolada dalka ayuu sheegay inaan xuquuqdoodii la sii ayna iyaga iyo caruurtoodu baahanyihiin.
Waxaa uu baaq u jeediyey Odayaasha dhaqanka ee hadda muqdisho ku shirsan, isagoo qiray iney duruufo adagi heystaan balse dhanka kale waxaa uu ka codsaday iney xildhibaanno waxtar leh soo xulaan, annagu idiinma imaan karo oo nalooma ogola ee fadlan anaga ayaa idin casuumeyna ee idinku noo imaada ayaa hadalladiisii ka mid ahaa.
Heyadaha garsoorka ayuu sheegay in kastoo la xaqiray oo xuquuqdoodii loo diidey haddana iney la gudboontahay iney baaritaan ku sameeyaan arrimaha musumaasuqa iyo lunsashada hantida qaranka, ciddii lagu helana ay maxkada soo hor istaajiyaan isagoo sheegay inuu isagu diyaar u yahay in haddii musuqmaasuq lagu helo lagu maxkamadeeyo.
Madaxda dowladda ayuu ugu baaqay iney la taliyayaal khibrad leh sameystaan, mar haddii uusan jirin qof waxkasta yaqaanaa, waa in wax walba ciddii khibraddeeda iyo aqoonteeda lagala tashadaa ayuu yiri. Cabdiraxmaan Cabdi shakuur ayaa isagoo hadalkiisa sii wata tusaale ku bixiyey in Nabiyullahi Musa (CS) uu ilaahey weydiistey in walaalkiis Haruun caawiye looga dhigo, markii sababta Alle weydiiyena uu Nabi Muse ku jawaabey waa iga Fasaaxad badanyahay, kadibna illaahey codsigiisa ka yeelay.
Xafladda oo qalabka warbahinta gudaha si toos ah looga tebinayey ayaa waxaa si hagar laaan shacabkii ka qeyb galay iyo intii hawada kala socoteyba hesso waddani ah ku madadaalinayey hobolada qaranka Waaberi oo uu ka dhexmuuqday Ustaada Cali Masxaf iyo gabdho iyo rag kale.